Anyị na-akwado obere ka nzọ na mgbe maka inwekwu iji MOQ bụ 1000. Price bụ agbanweli na gị ukwu na OEM na gị LOGO na nke agba igbe MOQ bụ 3000.
Ee, anyị nwere ike ma innovated Rd otu. The ngwaahịa nwere ike ahaziri dị ka gị arịrịọ.
N'ihi na n'omume, na-edu ndú oge bụ banyere ụbọchị 1. N'ihi na uka mmepụta, na-edu ndú oge bụ na gburugburu 7 ụbọchị mgbe na-anata ego ugwo. The ụzọ ụfọdụ, irè mgbe (1) anyị natara gị ego, na (2) anyị nwere ikpeazụ unu ihu ọma gị ngwaahịa. Ọ bụrụ na anyị ụzọ ụfọdụ na-adịghị arụ ọrụ na gị n'obi imecha, biko gaa n'elu gị chọrọ na gị ire ọrụ support. N'ọnọdụ nile anyị ga-agbalị nabata gị mkpa. Ọtụtụ mgbe anyị na-enwe ike ime otú ahụ.
Ị nwere ike ime ka ugwo ka anyị akụ, Western Union ma ọ bụ PayPal.
1 afọ niile Macverin si ngwaahịa akara kemgbe ụbọchị nke Mbupu akwụkwọ ọnụahịa.
Ee, anyị na-eji elu àgwà mbupụ nkwakọ. Anyị na-ejikwa pụrụ iche odachi mbukota maka ize ndụ ngwaahịa na irè oyi nchekwa shippers maka okpomọkụ mwute ihe. Specialist nkwakọ ngwaahịa na-abụghị ọkọlọtọ mbukota chọrọ pụrụ ịma ihe ọzọ ụgwọ. Ọzọkwa anyị na-enye ihe niile dị na-ebu gị nhọrọ.
Biko kpọtụrụ anyị na-enweta ihe ọmụma nke mbukota na ka anyị mara gị preferrence nke shippment ụzọ. Best-enye ga-zitere gị ASAP.